Geotech + Dronetech: waa inaadan seegin - Geofumed
Geotech + Dronetech: waa inaadan seegin
Janaayo, 2019 Geospatial - GIS, GPS / Qalabka, tabo cusub
3 iyo 4 ee soo socda Abriil sanadkan 2019, Fairoftechnology - Shirkadda Isbaanishka, oo ku salaysan Malaga, waxay abaabushaa dhammaan noocyada dhacdooyinka la xiriira teknolojiga- waxay ku martiqaadaysaa dhammaan jaaliyadaha kaqaybqaadashada inay ka qaybqaataan dhacdo weyn, halkaas oo lagu soo bandhigi doono dhawr sano oo sanooyin ah. Fairoftechnology, waxay leedahay qolal badan oo leh mawduucyo gaar ah marka loo eego baahida ka qaybgalayaasha iyo bandhigayaasha.
Qaybaha ugu muhiimsan ee uu diiradda saarey dhaqdhaqaaqiisa waxa ka mid ah: geotechnology, drones ama RPA, beeraha, dhismaha, naqshadeynta, injineernimada iyo waxqabadka xogta. Dhammaan, waaxyo fara badan oo farsamo ahaaneed oo u baahan baahi kulul oo isku keena aqoonta iyo isdhexgalka suuqa.
Soo jeedinta Fairoftechnology waxaa ka mid ah xarumaha 6, oo ah: geotech, dronetech, Agrotech, Buildingtech, Datatech iyo Smarttech oo leh hababkan soo socda:
drone: mid ka mid ah teknoolojiyadda oo ku soo batay sannadihii la soo dhaafay, laga soo bilaabo dhismahiisa shakhsiyadeed, ganacsi ama cilmi. Dronetech waa hoolka loogu talagalay si gaar ah loogu diyaargaroobo wax kasta oo la xiriira dhismaha, horumarinta, isbeddelka iyo xalalka ku salaysan diyaaradahaas.
Geotechnology: wuxuu soo bandhigay qolka Geotech, taas oo lagu gudbiyo, kor u kicinta iyo kor u qaadida macluumaadka la xiriira geomatics.
Beeraha: Bandhigga bandhigga Agrotech, waxay u heellan tahay in lagu tuso tiknoolajiyada dhammaan dhinacyada maamulka deegaanka iyo ilaalinta.
Qalabka dhismaha: Bandhigga Dhismaha 'Buildingtech', ayaa u heellan inuu muujiyo, kor u kiciyo oo horumariyo xalalka dhismaha. Iyadoo la tixgelinayo dhammaan tiknoolojiyadda ku jirta AEC iyo SmartCities, sida (BIM, R + D + I)
Barnaamijka iyo macluumaadka xogta: Datatech, dhammaan xallinta habka macluumaadka ayaa la hormariyaa
Magaalooyin fudud: Smartech, waa meesha ugu fiican ee loogu talagalay dhammaan horumarinta iyo xirfadlayaasha kuwaas oo lagu dhajiyay tiknoolajiyada nolosha ka dhiga magaalooyinka Smart. Munaasabaddan dhammaan noocyada xiriirka wada shaqaynta waxaa lagu hormariyaa inay abuuraan tiknoolajiyad cusub, ama si ay u wada shaqeeyaan si kuwa kale ee hore loo aasaasay ay shaqeeyaan.
Laakiin, bishan April 3 iyo 4, kaliya labo qol ayaa furan, Geotech iyo Dronetech. In Geotech, dhammaan khabiirada la xidhiidha ayaa la soo bandhigi doonaa, oo leh noocyada kala duwan ee meelaha, anteenada iyo dhulalka dhuleed ee soo qabta macluumaadka iyada oo la adeegsanayo fogfog. Sidoo kale, dhammaan horumarinta u dhiganta ee software iyo hardware of processing xog ee noocaan ayaa la arki karaa. Dhammaan arrintan waxay ku salaysan tahay qaabka isdhexgalka ee Fairoftechnology - guga 2019.
Si aad isugu keento dhamaan kuwa doonaya in ay ka shaqeeyaan beeraha gaaska, waxay noqonayaan shirkado waawayn, hay'adaha qaran ee qaranka, xitaa kuwa kor u qaadaya tiknoolajiyadaan si gaar ah. Sidoo kale, kor u qaadida shaqada si wada jir ah, si ay awood ugu yeeshaan in ay abuuraan isbahaysi faa'iido, taas oo u ogolaanaysa jawaab celinta nidaamyada iyo hababka la xiriira 4ta. Waxay ahayd dijitaal.
Xirfadda Geotech ee booqdaha xirfadlaha ah waa:
Qaybiyayaalka qalabka korjoogteynta,
shirkadaha software-yada ee wax soo saarka, wax soo saarka iyo soo saarida wax soo saarka walxaha,
R + D + i qaybta: la-talinta, farsamooyinka farsamada,
Xirfadlayaasha dhismaha iyo injineernimada (Madaniga, Warshadaha, Beeraha),
Hay'adaha dadweynaha iyo shirkadaha u heelan tababarka,
iyo qof kasta oo xiiseynaya horumarinta, dhismaha iyo horumarinta tiknoolajiyadaan.
Tani waa daabacaadda ugu horreysa ee dhacdooyinka qolka Geotech, xilligiisii ​​wuxuu noqon doonaa sanadle wuxuuna ka koobnaan doonaa maalmaha 2, waa mid xirfadle ah wuxuuna ka dhici doonaa Xarunta Madadaalada iyo Madadaalada ee Costa del Sol. Mawduucyada lagu wajaho Geotech, waa alaabta iyo dareemayaal, dhul ah lafaguraa cadastre hantida iyo ugu dambeyntii geoinformation. isuduwidda ee qolka this waxaa maamula Jorge Delgado García de la UPSJ Jaen.
Dronetech, waa dabeecada kale ee salonka ee tiknoolajiyada farsamada, waxay soo bandhigi doontaa dhammaan sheekooyinka RPA ee loogu yeero "Air Piloted Pilot". Qolkani wuxuu ku yaalaa dabaqa hoose ee Xarunta iyo Bandhiga Xarunta ee Costa del Sol, tanna, abuuritaanka cusub ee diyaaradaha fudud ee fudud ayaa looga doodi doonaa, iyo sidoo kale ujeedada ah in la sameeyo isbahaysi. Noqoshada darawallada, waxyaabaha muhiimka ah ee farsamada, sahanka iyo qabashada dhamaan noocyada xogta.
Horumarinta dayuuradaha, waxaa kale oo la siiyaa wadashaqeyn ka dhexaysa shirkadaha yaryar, kuwa dhexdhexaadka ah iyo kuwa waawayn, iyo sidoo kale tabarrucaha xirfadlayaasha si gooni ah. Tani waa daabacaadda koowaad ee Dronetech waxayna sii socon doontaa maalmaha 2.
Faahfaahinta martida xirfadeed ee Dronetech waa:
Developers iyo saarayaasha nidaamyada UAV, shirkadaha software gaar ah iyo horumarinta,
Shirkadaha kormeerka: shirkadaha maareynta warshadaha,
Shirkadaha qaybta maqalka, maareynta mashaariicda dhismaha iyo dhismaha, jimicsiga, farshaxanka iyo juqraafi, farshaxanka iyo kartoonka,
Shirkadaha beeraha ee takhasuska leh, tababarka diyaaradaha drone-ka ayaa xaqiijiyay AESA (ATOS),
Soo-saareyaasha walxaha caawiya iyo qalabka loo isticmaalo daroogooyinka,
Shirkadaha isgaarsiinta, maareynta iyo wax soo saarka Bigdata,
Shirkadaha iyo xirfadlayaasha, bandhige at show waxa ay kala yihiin: Shirkadaha horumarinta nidaamyada drones xirfadeed, distributors Drone qalabka iyo hawada dareemayaal iyo distributors accessories kale qalabka qaab dhismeedka, shirkadaha adeegga sahan injineernimada, khariidaynta, GIS, korontada duulimaad drone codsatay in injineernimada (geomatics, kormeerka warshadaha, beeraha sax, deegaanka.), injineernimada distributors software, iyo qaybta ugu dambeyntii kaabayaal ah (tababar, caymiska.)
Mawduuca dronetech, wuxuu ku salayn doonaa mawduucyada 4, taas oo ah dareenka, amniga, codsiyada iyo diyaaradaha. Iskuduwaha guud waa Israel Quintanilla García - Jaamacadda Polytechnic ee Valencia.
Guud ahaan, wakhti weyn oo faafinaysa macluumaadka dhammaan dhinacyada xiisaha leh iyo dhiirigelinta isticmaalka teknooloojiyada cusub ee dhismaha iyo guusha City City, isagoo ogsoon in Spain ay la socoto magaalooyin badan oo tijaabo ah, oo diiradda saarey sidii loo noqon lahaa lambarka SmartCities 1 . Sidoo kale waa dhacdo muujinaysa muhiimada ay leedahay gogoldhigyada, u muujinaysa booqdayaasha, waxayna soo bandhigaan baaxadda wax soo saarka iyo mashaariicda, iyada oo loo marayo horumarinta horumarka, labadaba goobaha iyo deegaanka.
Sidoo kale, waxaad tilmaami kartaa awoodda iyo liidashada mashaariicda, inaad awood u yeelatid inaad heshid wada shaqeyn cusub, iyo abuurista qiimo dheeraad ah oo ka soo baxa tiknoolajiyada cusub.
Halkan ayaad iska diiwaan gelin kartaa.
Post Previous«Previous Crisis Venezuela - 23.01.2019 Blog
Post Next 3 News iyo 21 munaasabadaha muhiimka ah ee ku jira GEO - Xajinta 2019Next »